Vardy → Arsenal, Messi → Man United, Wilshere → Man City Iyo Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Sabti Ah. | Haqabtire News
Vardy → Arsenal, Messi → Man United, Wilshere → Man City Iyo Wararkii Kale Ee Ay Qoreen Wargeysyada Maanta Oo Sabti Ah.
Maalin wanaagsan meel walba oo joogtaan akhristayaasheena sharafta leh, waxaan idiin soo gudbineynaa sida aad inooga barateen maalin walba wararkii ugu waa weyn ee ay qoreen wargesyayda maanta oo Sabti ah, xuquuqda iyo sugnaanshaha wararkaan waxaa ka mas’uul ah wargeysyada magacooda uu ku hor xusan yahay.
Xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Jack Wilshere ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday liiska ciyaartoyda uu doonayo tababaraha cusub ee Manchester City Pep Guardiola xagaagan.
Southampton ayaa wajaheysa inay ciyaartoy badan ka tagaan haddii uu baxo tababare Ronald Koeman oo wadahadalo kula jira Everton waxaana ciyaartoyda baxeysa ka mid ah Victor Wanyama, Shane Long iyo Graziano Pelle.
Kooxda Arsenal ayaa qarka u saaran inay dhameystirto saxiixa weeraryahanka kooxda Leicester City Jamie Vardy ka dib markii ay la kulmeen lacagta 20ka milyan ginni ee lagu burburin karo qandaraaska ciyaaryahanka, waxaana la filayaa in saxiixiisa la dhameystiro ka hor Euro 2016.
Lionel Messi ayaa laga yaabaa inuu si lama filaan ah ugu wareego Manchester United kuwaasoo wakiiladiisa la xiriiray labo jeer seddexdii isbuuc ee ugu danbeysay.
Kooxda Manchester United ayaa 20 milyan ginni ugu dhaqaaqeysa xiddiga mustaqbalka leh ee kooxda Bordeaux Adam Ounas.
Sergio Romero ayaa bartilmaameedsanaya inuu noqdo goolhayaha koowaad ee Manchester United madaama uu haatan kooxda macalin ka yahay Jose Mourinho.
Gary Lineker ayaa ugu baaqay Jamie Vardy inuusan ka tagin Leciester City oo uusan ku biirin kooxda Arsenal.
Nani ayaa sheegay in Manchester United ay koobab ku guuleysan doonto madaama uu haatan tababare ka noqday Jose Mourinho.
Real Madrid ayaa mar kale u dhaqaaqi doonta goolhayaha Manchester United David de Gea xagaagan laakiin tababaraha cusub ee Red Devils Jose Mourinho ayaa doonaya inuu 25 jirkaan ku sii ceshto Old Trafford.
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa doonaya xiddiga khadka dhexe ee AS Roma Miralem Pjanic oo 26 sanno jir ah, waxaana uu doonayaa inuu adkeeyo udub dhexaadka kooxda.
Kabtanka Manchester City Vincent Kompany ayaa la xaqiijiyay mustaqbalkiisa kooxda inkastoo uu tababare Pep Guardiola doonayo inuu la soo wareego daafaca 22 sanno jirka Athletic Bilbao, Aymeric Laporte iyo 22 jirka kooxda Everton, John Stones.
Chelsea ayaa isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso xiddiga garabka ka ciyaara ee Talyaaniga ah ee kooxda Lazio 29 sanno jirka Antonio Candreva.
Barcelona ayaa kula biirtay kooxaha Chelsea iyo Manchester City tartanka loogu jiro daafaca 21 jirka ah ee kooxda Atletico Madrid Jose Gimenez.